10 Koorsooyinka tooska ah ee ugu Fiican Maareynta Mashruuca Iyadoo Codsi Bilaash ah 2020
Maqaalkan, waxaan ku soo bandhignay qaar ka mid ah koorsooyinka ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee maareynta mashruuca ee internetka maanta oo leh codsi bilaash ah oo si ballaadhan wax looga qoro iyaga, iyaga oo ku siinaya xiriirkooda tooska ah ee codsiyada haddii aad xiiseyneyso inaad ku biirto mid ka mid ah barnaamijyada.
Thanks to internetka waxaad si dhab ah wax uga baran kartaa koorso khadka tooska ah waxaadna ka heli kartaa shahaado dhab ah oo haa shahaadadaas waa la aqoonsan doonaa sida ugu badan ee uu ku helay iskuul dhab ah.
Waxbarashada tooska ah waxay ka caawisay dad badan inay gaaraan hamigooda tacliimeed iyada oo ay ugu wacan tahay khadka tooska ah way fududahay, walaac la'aan iyo habboon.
In kasta oo aan ka taageerno ardayda inay helaan oggolaansho dibadda ah barashada khadka tooska ah, waxaan sidoo kale u doodnaa barashada khadka tooska ah waxaanan halkan ku qornay dhowr maqaal oo ku saabsan fursadaha khadka tooska ah.
Waxaan haynaa maqaal la cusbooneysiiyay oo ku saabsan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada oo wata shahaadooyin sidoo kale waxaan haynaa maqaal ku saabsan kulliyadaha internetka ee jaban oo aan khidmad dalab lahayn halkaas oo aad kaliya ka codsan karto gelitaanka khadka tooska ah ee bilaashka ah.
Daraasaddayda ka dib, waxaan awooday inaan la imaado liis ay ku qoran yihiin koorsooyin onlayn ah oo ku saabsan Maamulka mashruuca iyo sidii caadiga ahayd, waa liis la cusbooneysiiyay oo leh faahfaahinta mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka la taxay.
1 Ku saabsan Koorsada Maareynta Mashruuca
2 Koorsooyinka tooska ah ee Maareynta Mashruuca (Codsi Bilaash ah)
2.1 Mabaadi'da Maareynta Mashruuca iyo Dhaqanka
2.2 Aasaaska Maamulka Mashruuca
2.3 Maareynta Mashruuca IT
2.4 Qorshaynta Kormeerka iyo Qiimeynta
2.5 Hordhaca Maareynta Mashruuca Casriga ah
2.6 Maareynta Mashruuca Scrum
2.7 Mabaadi'da Maareynta Mashruuca Agile
2.8 Mashruuca Miisaaniyadda iyo Jadwalka
3 Faa'iidooyinka Koorsooyinka Maamulka Mashruuca
4 Jaamacadaha internetka waxaad ku baran kartaa koorsooyinka Maareynta Mashruuca
Ku saabsan Koorsada Maareynta Mashruuca
Maareynta mashruuca waa habka qofku u abaabulo una maareeyo ilaha loo baahan yahay si uu u fuliyo mashruuc, dadka shaqadan loo yaqaan waxaa loo yaqaan maareeyayaasha mashruuca.
Maamulayaasha mashruucu waxay qabtaan wax kasta oo lagama maarmaan u ah inay mashruuc ku dhamaystiraan waqti cayiman, waa mashruuc sidaa darteed waa inay lahaato bilow iyo dhamaad waana in la xaqiijiyaa himilooyinka mashruucaas.
Maamule mashruuc ahaan adigaa mas'uul ka ah hawsha maamulida mashruuc waxaadna qaban doontaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah dhammaystirka mashruuca iyo sidoo kale inaad gaarto hadafyada waxaadna noqon kartaa maamule mashruuc adigoo ku baranaya jaamacad ama xitaa khadka tooska ah, taasi waa sax, waxaad ka heli kartaa shahaadada maamule mashruuc khadka tooska ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira koorsooyin ku saabsan maareynta mashruuca oo leh codsi bilaash ah oo aad ku baran karto khadka tooska ah waana taas sababta ugu weyn ee loo dhigo maqaalkan meesha ugu horeysa.
Koorsooyinka tooska ah ee Maareynta Mashruuca (Codsi Bilaash ah)
Mabaadi'da Maareynta Mashruuca iyo Dhaqanka
Aasaaska Maamulka Mashruuca
Maareynta Mashruuca IT
Qorshaynta Kormeerka iyo Qiimeynta
Aasaaska Qorsheynta iyo Maareynta Mashruuca
Hordhaca Aragtida iyo Tababbarka Mashruuca Casriga ah
Maareynta Mashruuca Scrum
Mabaadi'da Maareynta Mashruuca Agile
Maareynta Khataraha Mashruuca iyo Isbedelada
Mashruuca Miisaaniyadda iyo Jadwalka
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee maareynta mashruuca ee internetka maanta waxaana si rasmi ah u bixiya Jaamacadda California waxayna qaadataa muddo ku dhow 8 toddobaad in la dhammaystiro oo lagu helo shahaado.
Dhamaadka taxanaha, waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato oo aad maamusho baaxadda wax soo saarka, dhisid qaab dhismeedka burburka shaqada, inaad abuurto qorshe mashruuc, aad abuurto miisaaniyadda mashruuca, qeexdo iyo qoondayso ilaha, maareynta horumarinta mashruuca, aqoonsato iyo maareynta halista, oo ay fahmaan habka soo iibsiga mashruuca.
Waa is-socodsiin waxayna u baahan tahay oo keliya 6 saacadood oo ah waqtigaaga toddobaadki. Codsiga waa bilaash laakiin helitaanka shahaadada waa la bixiyaa.
Koorsadan maareynta mashruuca khadka tooska ah waxaa bixiya Jaamacadda Virginia waxayna socotaa muddo qiyaastii ah 2 illaa 4 toddobaad oo leh shahaado la heli karo dhammaadka; in kastoo dalabka koorasku si buuxda u bilaash yahay.
Kani waa koorso hordhac ah oo ku saabsan fikradaha muhiimka ah ee qorshaynta iyo fulinta mashaariicda. Barteyaashu waxay aqoonsan doonaan waxyaalaha u horseeda guusha mashruuca, waxayna bartaan sida loo qorsheeyo, loo lafaguro, loona maareeyo mashaariicda. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan habab casri ah iyagoo tixgelinaya caqabadaha noocyada kala duwan ee mashaariicda.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka maaraynta maareynta mashruuca ee shabakadda maanta. Koorsooyinka waxaa si buuxda loogu bixiyaa internetka Dugsiga Ganacsiga ee Hindiya oo soconaya muddo afar toddobaad ah.
Codsi iyo barnaamijba laftiisu waa bilaash laakiin si aad uga hesho shahaado jaamacadda kadib qaadashada koorsada, waa inaad bixisaa khidmad cayiman.
Dabcan waxay ka hadlaysaa wajiyaal kala duwan oo ku saabsan (i) bilowga mashruuca, (ii) qorsheynta mashruuca iyo jadwalka, (iii) mashruuca la socodka iyo gacan ku haynta, iyo (iv) joojinta mashruuca.
Kani waa koorso maareyn mashruuc oo bilaash ah oo internetka ah oo ay bixiso Jaamacadda Philanthropy dhammaan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Barnaamijku wuxuu dalbanayaa kaliya 1 ilaa 2 saacadood oo waqtigaaga ah usbuucii wuxuuna soconayaa dhowr toddobaad kadib marka shahaadada la bixiyo.
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida mashaariicda guuleysta ay u qorsheeyaan xog ururinta, maaraynta, falanqaynta, iyo isticmaalka.
Hordhaca Maareynta Mashruuca Casriga ah
Kani waa koorso maareyn mashruuc oo bilaash ah oo internetka ah oo lagu bixiyo barta Alison. Koorsadan gaarka ah ee maareynta mashruuca waa mid gebi ahaanba bilaash ah, labadaba arjiga iyo shahaadada intuba waa bilaash.
Iskeed ayey u socotaa waxayna socotaa muddo 15 saacadood oo keliya ah ka dib ka-qaybgalayaasha la qiimeeyo isla markaana shahaado maamuleed mashruuc oo bilaash ah la siiyo dhammaan ka-qaybgalayaasha guuleysta.
Koorsadan waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Udemy platform' laakiin si aad u hesho shahaado waa inaad bixisaa kharashka barnaamijka oo buuxa.
Koorsada waxaa loo qoondeeyay inay ka caawiso qof kasta oo xiiseynaya inuu wax badan ka ogaado Scrum; wax ka baro fikradaha muhiimka ah ee Scrum iyo helitaanka faham aasaasi ah oo ku saabsan sida qaabdhismeedka Scrum uu u shaqeynayo bixinta mashaariicda guuleysta.
In kasta oo lagaa doonayo inaad bixiso kharashka barnaamijka oo dhan haddii aad dooneysid inaad hesho shahaado, weli waad qaadan kartaa koorsada si buuxda oo bilaash ah haddii aadan run ahaantii dan ka lahayn shahaadada.
Kani waa koorso bilaash ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan maareynta mashruuca oo lagu bixiyo barnaamijka 'edX platform' wuxuuna u furan yahay inuu ku soo dhoweeyo ardayda adduunka oo idil.
Shahaadooyin ayaa loo heli karaa dhamaadka koorsada ka qaybgalayaasha guuleysta laakiin kaqeybgalayaashan waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan khidmadda soo saarista shahaadada magac u yaal ah.
Koorsadan khadka tooska ah ee maareynta mashruuca waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah ee loo yaqaan 'edX platform' ee Bangiga Horumarinta Ameerika ee loogu talagalay ardayda ka socota waddamada adduunka oo dhan.
Iskeed ayey u socotaa oo waxay socotaa muddo 10 toddobaad ah oo ay ugu yar tahay $ 25 khidmadda caddaynta ah ee loogu talagalay kaqeybgalayaasha doonaya inay helaan shahaado.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu caansan maaraynta maareynta mashruuca ee lagu bixiyo khadka tooska ah iyadoo codsi bilaash ah ay bixiso Jaamacadda California, Irvine
Waxay iskood u socotaa iyadoo la qiimeynayo darajooyinka laynka iyo qiimeynta kama dambaysta ah ka hor bixinta shahaadada. Kaqeybgalayaasha waxaa laga filayaa inay uga gudbaan koorsada si guul ah si ay ugu qalmaan bixinta shahaadada.
Faa'iidooyinka Koorsooyinka Maamulka Mashruuca
Guud ahaan, barashada maaraynta mashruuca waxay xoojin doontaa xirfadahaaga meelaha soo socda;
Maareynta iyo wada xiriirka wax ku oolka ah ee kooxda.
Qorshaynta yoolka istiraatiijiga ah
Awood u leh inuu aqoonsado caqabadaha iyo inuu si hufan u maareeyo khatarta
Awood u leh in sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah looga faa'iideysto kheyraadka, hawsha iyo xubnaha kooxda
Awood u leh inuu si hufan u abuuro jaangooyooyin lagu qiimeeyo horumarka mashruuca
Awood u lahaanshaha kormeerka mashruuc laga bilaabo marxaladda hore ilaa dhamaadka iyada oo aan laga reebin qorshooyinka isbeddelka si wax looga qabto wixii dhibaato ah ee ka dhalan kara inta hawshu socoto
Dejinta tilmaamo xubnahaaga kooxda ahi raaci karaan.
Fursadaha lagu helo shaqooyinka mushahar wanaagsan ka helo shirkadaha ugu sareeya
Si si isku mid ah kaaga caawiyaan dheeraad ah, halkan waxaa ku yaal liiska jaamacadaha internetka ee aad ku baran karto koorsooyinka Maareynta Mashruuca.
Jaamacadaha internetka waxaad ku baran kartaa koorsooyinka Maareynta Mashruuca
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee internetka bixiya shahaadada maaraynta mashruuca iyo koorsooyinka shahaadada.
Waxaa lagugula talinayaa inaad cilmi baaris dheeraad ah ku sameyso mid kasta oo ka mid ah iskuulada aad dooratid midka adiga kugu habboon.
Waad go'aansan kartaa inaad wax ka barato in ka badan hal koorso oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan maareynta mashruuca ee liiska kor ku xusan iyo sidoo kale inaad hesho shahaadada caddaynaysa inaad si guul leh u dhammaysay koorsada.
Koorsooyinkani waa 100% khadka tooska ah, way jilicsan yihiin - taas oo macnaheedu yahay waxaad ku baran kartaa sida ugu habboon ee aad u baahan tahay waana dhakhso in la dhammaystiro.
Waxaad ka heli kartaa xulashooyinka kala duwan ee barnaamijyada barnaamijyada bilowga ah inay kaa caawiyaan adiga softwareforprojects.com.
Waad dalban kartaa inaad wax ka barato koorsooyinkan ama inaad ku hesho dalacsiin goobtaada shaqada ah ama kordhinta lacag bixinta ama xitaa aad bilowdo waddo cusub oo shaqo ah markaad dhammayso.
Koorsooyinka Maareynta Guud ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah oo leh shahaadooyin
Shahaadooyinka Ganacsiga ee ay tahay inaad hubiso inaad haysato
Koorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee bilaashka ah
Jaamacadaha tooska ah ee Bilaashka ah ee Darajooyinka Onlineka ah
10 Koorsooyinka tooska ah ee ugu Fiican Maareynta Mashruuca Iyadoo Codsi Bilaash ah 2020koorsooyinka maamulka mashruuca oo bilaash ahkoorsooyinka khadka tooska ah ee maareynta mashruucakoorsooyinka maareynta mashruuca ee internetka 2020koorsooyinka maareynta mashruuca khadka tooska ah
Previous Post:Top 15 Deeqaha aan la Xaqiijin ee Kanada
Post Next:15 Yale Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Ardayda iyo Xirfadleyda
Pingback: 300+ Koorsooyin Online oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin La Daabici Karo 2021
Booqo Website wuxuu leeyahay,
May 4, 2021 at 10: am 53
Haddii aad la kulanto dhibaatooyin inta aad ka shaqeyneyso koorsooyinkaaga maareynta mashruuca, fadlan booqo Edudorm qorayaasha si aad uga hesho caawinaad xirfadeed.